ဒ ၊ ဓ ပြဿနာဖြေးရှင်းနည်းများГўв‚¬В¦. - MYSTERY ZILLION
ဒ ၊ ဓ ပြဿနာဖြေးရှင်းနည်းများГўв‚¬В¦.
December 2007 edited March 2010 in DTP
[FONT="]`` ဒ ၊ ဓГ‚ВґГ‚Вґ ပြဿနာဖြေးရှင်းနည်းများ….[/FONT]
[FONT="]ကို Zulu ရဲ့ Program အလိုက် ဖြေးရှင်းနည်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။[/FONT]
[FONT="]InDesign[/FONT][FONT="] ... Edit > Preference > Type ကိုဖွင့်ပြီး Use Typographer's Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
Illustrator ... File > Document Setup > Type ကိုဖွင့်ပြီး Use Typographer's Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
Photoshop ... Edit > Preference > Type ကိုဖွင့်ပြီး Use Smart Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
PageMaker7... File > Preference > General > More > Use Typographer's Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
Corel Draw 12 ... Tools > Options ကိုဖွင့်ပြီး အဲဒီထဲက Text > QuickCorrect ကိုထပ်ဖွင့်ပါ။ အဲဒီမှာမှ ညာဘက်ခြမ်းမှာ အပေါ်ဆုံးဒုတိယတခုဖြစ်တဲ့ Change Straight quotes to typographic quotes ကို Uncheck လုပ်ပေးပါ။ (အပေါ်ဆုံးတခုကိုလည်း Uncheck လုပ်ထားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ စာကြောင်းရဲ့ ပထမဆုံးစာလုံးတွေကို Capital စာလုံးလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာအတွက်ဆိုရင် အဲဒါကို Uncheck လုပ်ထားပါ။)
Microsoft Word ... Tools > Auto Correct ကိုဖွင့်ပါ။ အဲဒီထဲက Auto Format As You Type ကိုထပ်ဖွင့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Straight quotes with Smart quotes ကို Uncheck လုပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် ဒဒွေး ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးလေ။ အားလုံးပြုံးပျော်ကြပါစေဗျား ...[/FONT]
[FONT="]pmd ရဲ့ ဖြေးရှင်းနည်းအသေးစိတ်ကို တင်ပြဆွေးနွေးပါမယ်..[/FONT]
[FONT="]Pmd အားလုံးမှာ file new တောင်းခံသည့်အချိန်၊ Word (သို့) powerpnt ထဲက စာသားတွေကို Pmdသို့ ကူးယူတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်…[/FONT]
[FONT="]Pmd အားလုံးမှာ မှာ file - Preferences - General…. – More… - Use typographer’s – quotes ထဲက Uncheck လုပ်ပါ။အဆင်ပြေပါမယ်.[/FONT]
[FONT="]Office 2007 Microsoft Word[/FONT][FONT="] မှာဆိုရင် office Button – Word Options – Proofings –Auto correct Option… - AutoFormat As you type – ‘’strainght quotes’’ with “smart quotes” ကို Uncheck လုပ်ပါ [/FONT]
[FONT="]Office 2007 Microsoft powerpoing[/FONT][FONT="] မှာဆိုရင် အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းပါပဲ။[/FONT]
[FONT="]Office 2007 Microsoft excel[/FONT][FONT="] မှာဆိုရင် cell တစ်ကွက်ထဲမှာ``ဒ နဲ့ ဓ Г‚ВґГ‚Вґ ကို တစ်လုံးတည်းထားရှိအသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။
IT pro သမားတွေရဲ့ ပြဿနာရှင်းလင်းနည်းတွေက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. အလွယ်ကူဆုံးနည်းများကိုသာ စာဖတ်သူသုံးစွဲပါ..
[/FONT] [FONT="]အဆိုပါ ကိစ္စရပ်တွေဟာ font နဲ့ပတ်သက်ပြီ fake ကိစ္စများကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်.. စာဖတ်သူ လေ့လာမည်ဆိုပါက Computer Magazine no.6 October 2007 မှာပါတဲ့ ယူနီကုတ်ဆိုတာ ချိုနဲ့လား title ကိုလေ့လာပါ ချစ်စွာသော [email protected][/FONT]
pagemaker မှာပေါ့ဗျာ။ ဒနဲ့ဓ ပြသနာကို ctrl+Alt နှိပ်ပြီးရိုက်ရင်လည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်ရိုက်ရင်တစ်ကြိမ်နှိပ်ရိုက်ရမှာနော်။
PageMaker7 တွင် ဒ နှင့် ဓ အတွက် file>preference..>general..>More.. .. တွင်ပြင်ပြီးသော်လည်း ဒ ရိုက်လျှင် - ္လ သာပေါ်ပြီး ဓ ရိုက်လျှင် လေးထောင့်ကွက်သာပေါ်သည်။ ctrl+z ဆိုလည်းမရပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့вЂ¦вЂ¦вЂ¦..
PageMaker7 တွင် ဒ နှင့် ဓ အတွက် file>preference..>general..>More.. .. တွင်ပြင်ပြီးသော်လည်း ဒ ရိုက်လျှင် - ္လ သာပေါ်ပြီး ဓ ရိုက်လျှင် လေးထောင့်ကွက်သာပေါ်သည်။ ctrl+z ဆိုလည်းမရပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့………..
PageMaker ကို ဖွင့်ဖွင့်ချင်း စာရွက် new မခေါ်ခင်ပြင်ပါ။:67:
ပေးတယ် အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ့်။ အဆင်မပြေရင် ပြောနော်.....:d:d:d
[FONT="]`` ဒ ၊ ဓГ‚ВґГ‚Вґ ပြဿနာဖြေးရှင်းနည်းများвЂ¦.[/FONT]
[FONT="]Pmd အားလုံးမှာ file new တောင်းခံသည့်အချိန်၊ Word (သို့) powerpnt ထဲက စာသားတွေကို Pmdသို့ ကူးယူတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်вЂ¦[/FONT]
[FONT="]Pmd အားလုံးမှာ မှာ file - Preferences - GeneralвЂ¦. вЂ“ MoreвЂ¦ - Use typographerвЂ™s вЂ“ quotes ထဲက Uncheck လုပ်ပါ။အဆင်ပြေပါမယ်.[/FONT]
[FONT="]Office 2007 Microsoft Word[/FONT][FONT="] မှာဆိုရင် office Button вЂ“ Word Options вЂ“ Proofings вЂ“Auto correct OptionвЂ¦ - AutoFormat As you type вЂ“ вЂвЂ™strainght quotesвЂ™вЂ™ with вЂњsmart quotesвЂќ ကို Uncheck လုပ်ပါ [/FONT]
may i know more about Myanmar font to use in pagdmaker and ms word
how to get Myanmar(parli and others) font and how to install and to use.
And then i want to know and get how to type Maths font in both word and page maker.
And then i want to know and get how to type Maths font in both word and page maker. i am waiting your help thankalot yours
ကျွန်တော် ဘာသာပြန်တာ လွဲနေတာလားခင်ဗျာ...
၁ ကတော့ parli စာတွေကို ဘယ် fonts တွေမှာ ရနို်င်သလဲ၊ fonts ကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ
နောက် တစ်ခုကတော့ သိပ်နားမလည်းဘူး
[email protected] သို့မဟုတ် iceos.22web.net ကနေ ဆက်သွယ်မေးနို်င်ပါတယ်။
fonts တွေ စုစည်းထားတာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို့ Install လုပ်ရမလဲ၊ သုံးရမလဲဆိုတာ
စာရေးသားပြီး ပေးပို့ပေးပါမယ်။ လိပ်စာတော့ ပေးပါခင်ဗျာ.. ကျေးဇူးတင်လျက်...ရေခဲ
ဒါကို ကိုရေခဲကြီး အစား ကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ သချင်္ာ စာလုံးရိုက်ဖို့ Office 2003 တင်တုန်းက Equation Editor တင်ခဲ့ရင် အဲဒါနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဗျ။ Office 2007 ဆိုရင်တော့ သူ့ဟာသူ တင်ပေးပြီးသား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Page Maker အတွက်ရော Office အတွက်ပါ သုံးလို့အဆင်ပြေတာကတော့ Math Type ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ သချင်္ာ ရိုက်ရင် Latex သုံးပါတယ်။ Latex အကြောင်းကတော့ ကိုလူပျိုကြီး ကပိုသိတယ်ဗျ။:D
Math Type ကိုတော့ ဒီကနေရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
၁။ MS word မှာရိုက်ထားတဲ့စာတွေကြားထဲကနေ ထပ်ရိုက်လိုက်ရင်(သို့)ရွေ့လိုက်ရင် နောက်ကစာတွေကပျောက်ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
၂။ PageMaker7 မှာစာတန်းကို အ၀ိုင်းပုံ အခုံးပုံ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ
၃။ အခြားသောစက်တစ်လုံးကမြန်မာဖောင့်တွေအစုံသွင်းထားသော်လည်း MS word တွင်မြန်မာစာရိုက်မရပါ။ လေးထောင့်ကွက်များသာပေါ်သည်။ ဇော်ဂျီဖောင့်တစ်မျိုးတည်းသာရသည်။ ကိုယ့်စက်မှာရိုက်ပြီးသား Word files တွေကိုအဲဒီစက်မှာသွားဖွင့်တော့ဖောင့်တွေကပေါ်တယ်။ ctrl+shift ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းနှိပ်သော်လည်းမရပါ။ မည်သို့နည်း?။
1. It is overtyoe. Double click to OVR on Status bar, buttom of MSword window. (on/off)
2. Can't create in Pagemaker only. Can use Insert Object from doc, Corel, PPt, xls etc....
3. It may be possible Keyboard Setting. Normal Computer use US Keyboard.
microsoft Publisher မှာ ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြြေ၇ှင်းရမလဲဆိုတာကို လည်းသိပါရစေ
when the PC starts I can only see the desktop background not the icons..but task manager is available..but I can't call the explorer.exe from task manager..It ain't work..............the Windows can't be repaired....so......Help me..plz..
Math type ကို ဘယ်လို install လုပ်ပြီး သုံးရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါလား ..........
Math type ကို ဘယ်လို install လုပ်ပြီး သုံးရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါလားရှင် ..........
nwenwehtun87 wrote: »
ဘယ်လို install လုပ်သလဲဆိုတော့ သာမာန် software တွေ install လုပ်သလိုပဲဗျ။ အဲဒီမှာ key လည်းပါတယ်နဲ့တူတယ်။ key ထည့် install လုပ်ပါဗျာ။ install လုပ်ပြီးရင် MS Word တို့ Excel တို့မှာ ချိတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ macro ကိုတော့ enable ပေးလိုက်ပါဗျာ။ Office ဘယ်လောက်နဲ့ တွဲသုံးမှာလဲဗျ။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါဗျာ။ Office မှာပါတဲ့ Equation Editor နဲ့လည်း သချင်္ာရိုက်လို့ရတယ်ဗျ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။